अब ज्ञाने, केपि, प्रचण्डे, शेरे र कमले आवस मुलबासी मंगोललाई मतलब छैन - मंगोल युबा संयोजक अमित याक्खा - MONGOL KHABAR
अब ज्ञाने, केपि, प्रचण्डे, शेरे र कमले आवस मुलबासी मंगोललाई मतलब छैन - मंगोल युबा संयोजक अमित याक्खा
धरान । भदौं १० मंगलबार, म राजनीति विश्लेषण त होइन, तर विश्लेषण यस्तो मेरो सहि नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । बास्तबमा मंगोल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन-डा.गोपाल गुरुङ संगठनले आज ८०% अहिन्दु मुलबासीहरुलाई एक कट्ठा गर्ने र यो देश मुलबासीहरुको हो ।
मुलबासी नै शासक हुनु पर्दछ र बिश्वमा जति नि राष्ट्र छ, त्यहाँ को मुलबासीहरुले नै शासक हुदा मात्र समृद्धि भएको सत्य तथ्य हो । तर मंगोलहरु एक हुँदै मुलबासी एकता को माला उनिरहदा यहाँ बाहुनबादी नीतिको ती शासकहरुको निकै हाबी भएको देखिरहेको छु । नेकपालाई काङ्ग्रेसको डर हैन यहाँ काङ्ग्रेसलाई नेकपाको डर हैन न त राप्रपा कै डर यहाँ सबै पार्टीलाई एक मात्र डर छ ।
यहाँ अब आम मंगोलहरु एक हुदैछ यिनिहरु शासक बने हाम्रो आर्य अस्तित्व मेटिदैछ,यिनिहरुलाई कसरी निष्क्रिय गर्ने ? त्यसैले त आज २ तिहाइको सरकार बनाए पनि फेल मुद्दा लिएर राज्य गरिबको चपेटा माथी अझै थप्न चहान्छ ता कि अब यो सरकार लाई नेपाली जनताले घृणा गरोस बरु राजा ठिक छ भनी ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्व पालो पर्खेको र यस कै मोहडा आज रबि लामिछाने र पुडासैनी बनेको छ ।
होइन भने विश्वको अपराध अनुसन्धानमा उत्कृष्ट पाँचमा पर्ने प्रहरी धेरै केशमा आँखा चिम्लेको मेरो अध्यनले बताउछ । सरकार जानिजानी आफू घृणित काम गरि जनता भुलाउने काम गर्दैछ भने ज्ञानेन्द्र सुष्म अध्यन गरि अगाडि बढ्दैछ तर नेपाली जनता बास्तब मै अस्तित्व बिहिन बनाए पछि जे भन्दा पनि हो,को पछि लागेर देशले एउटा समृद्धि ल्याउन नसकेको पनि हो । किन भने बेहोसी लाखौ मानबलाई एक होस भएको ब्यक्तिले नचाउछ भने झै आज २ करोड ३० लाख मंगोल वर्ण भएकाहरुलाई साच्चिकै बेहोसी बनाएको छ ।
यो देशमा आर्य वर्णको शासकहरुले ब्युँझिदै गरेको मुलबासीको संगठन र मंगोलबाद संग आज धेरै झस्किएको छ । बाहुनबाद ताकी मंगोलहरुलाई फेल गर्न कस्ता कस्ता नाटक रचिरहेको हुन्छ त्यही भएर nepalese political is dirty game. भनेर कतिपय वाक्क भएर राजनीति मन पराउदैनन । यसै सन्दर्भलाई मुलबासीहरु अब एक भै आफ्नो अस्तित्व पहिचानको निम्ति लडौ,ता कि दास्त होइनौं शासक बन भनी युग पुरुष अमर डा.गोपाल गुरुङ ज्युले सिद्धान्त र दर्शन कोर्न बाध्य हुनु भयो ताकी political power is mastar key of all locks .भनेर अब आम मुलबासीहरु आफ्नो अस्तित्व बुझ कति दिन बाहुनबादको दयामा बाच्छौ ।
मर्नु छ सबैले एक दिन आफ्नो देशमा दास्त्व भएर मर्ने होइन शासक बनी सानले मर्ने नीति ल्याउनु छ । मुलबासी एक भएको हेर मात्र ? नेपालको आर्य डराउदै छ भोलि विश्वको आर्य डराउछ । मंगोलहरुको शक्ति देखेर । यहाँ ज्ञाने, केपि, प्रचण्ड, शेरे र कमले आवस हामिलाई मतलब छैन । हामीलाई मंगोलबादको राजनीति ल्याउनु छ । सक्षम भएको गरिब मुलबासीको छोरा लाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउने नीति तय गर्नु छ ।
समाबेसी लोकतन्त्रको सहि वकालत गर्नु छ । जुटौ मंगोल उठौ अब मंगोल क्रान्तीको आवाज तयारी गर । अब राज्यमा भएको बिभेदी कानुन च्यात्नु छ । अब मंगोलहरुको कानुन लेख्नु छ । यो देशमा भएको गरिबी आर्य समाजको पनि मुहार फेरि दिनु छ । मुलबासी एकता जिन्दाबादको नारा लगाउनु छ । जय मंगोल जय मुलबासी लेख्ने कुरा धेरै छ । अझै, यदि भए पनि पूरा पढी कमेन्ट गर्नुस ताकी म गलत हुन सक्छु यदि राम्रो लागे सबैलाई शेयर गर्दै जाऔं धन्यवाद ।